Ifulethi elisezingeni eliphansi leBright 3 br elinokubukwa okuhle kolwandle olusezingeni eliphezulu
Woolner, Northern Territory, i-Australia
Umndeni wakho uzoba seduze nayo yonke into uma uhlala kule ndawo ephakathi nendawo. Ilungele ukusebenza, ukuphumula noma ukudlala! Itholakala nje imizuzu emi-5 ukushayela usuka e-Darwin CBD, leli fulethi elihle elisezingeni eliphansi linikeza indawo ekahle yokuhlala upholile futhi uzibekele ukuhlala kwakho eDarwin.
Leli fulethi elikhanyayo nelivulekile linenzuzo eyingqayizivele yokuba sezingeni eliphansi, kepha linolwandle oluhle nokubukwa kwedolobha. Ukupaka kumahhala futhi khona kanye emnyango wakho.
Jabulela uhambo olufushane (noma ukushayela) ukuya emakethe edumile ye-Parap, nezinye izimakethe eziseduze - i-Mindil, i-Rapid Creek, i-Nightcliff.... ukubala ezimbalwa.
Thatha uhambo olufushane uye ezindaweni eziningi eziseduze - iCullen Bay, izimakethe zaseMindil Beach kanye neMindil Beach Casino, imisebenzi yaseWaterfront kanye nezindawo zokudlela, Botanical Gardens, Museum's, East Point, Fanny Bay, Nightcliff, ukusho nje okumbalwa !!
Thatha enye yama-noodle ethu ephuli bese wehlela e-Waterfront futhi uchithe usuku!
Ukudla okuningi, ukubona, ukuthenga, nokunye okuningi ongakwenza! Futhi uma usukwenzile konke lokho, ungabuyela emuva ekunethezekeni okupholile kwefulethi lethu elihle le-Brewery Place futhi uvele uncome ukubuka! Buka imikhumbi ingena iphuma iye ePort ngenkathi silungisa ukudla ekhishini lethu elihlome ngokuphelele, noma uzipholele kuvulandi ukuze uthole isiphuzo esipholile noma i-BBQ.
Ngesikhathi sokumanzi, bukela iziphepho zingena futhi ubambe ukukhanya okumangalisayo nemibukiso yemisindo!
Uma uthanda ukudoba, bamba enye yezinduku zethu esinikeziwe bese uvula umugqa ngasogwini lolwandle, noma uvule isikebhe sakho ngezansi komgwaqo kurempu yesikebhe yase-Dinah Beach.
Imindeni izothanda ukuhlala ngokunethezeka kombhede, isilawuli kanye nesihlalo esiphezulu esitholakala uma icelwa. Futhi ngokufinyelela okulula kakhulu kwaphansi, asikho isidingo sokukhathazeka ngokuthwala izingane noma igrosa ezitebhisini noma amakheshi!
I-Woolner iyindawo yesimanjemanje, ehlanzekile futhi ethulile, ikakhulukazi enabantu abaqeqeshiwe.
I'm a stay at home Mum to 3, farmer, business owner and wife.
Sicela ungangabazi ukungithinta nganoma yimiphi imibuzo noma imibuzo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Woolner namaphethelo